बोल्न नसक्ने दलित जोडीको विचल्ली, मन्दिरमा आश्रित
Sun, May 27, 2018 | 23:31:30 NST
17:13 PM ( 10 months ago )
बैतडी, साउन २५ – आधा जिन्दगी काटिसक्दा पनि बोली फुटेको छैन । उमेरले ५८ वर्ष पुगिसक्नु भएका हरिराम नेपाली मात्रै होइन, उहाँकी श्रीमती लिलाको समस्या पनि उस्तै छ ।
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–८ का स्थायी बासिन्दा हरिराम र लिलाको यो समस्या जन्मजात नै हो । बस्ने घर र खाने गाससम्म नभएपछि दुवैजनाले भएको घर छाडेर गाउँ नजिकैको त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरको पेटीमा बस्दै आएका छन् ।
वर्षायामको झरी । घरी दर्किने, घरी रोकिने । यस्तै झरीमा हरिराम र लिला भने एकसरो पालमा कठ्याङ्ग्रिएर रात बिताउँछन । झरी परेपछि हुने चिसोमा शरीरमा लाउने दुवै जनाको कपडा छैन भने ओढ्ने ओछ्याउने कपडाको अभाव पनि उस्तै छ ।
उनीहरुको यो हालत भइसक्दा पनि स्थानीय प्रशासनले हेरेको छैन । प्रशासनले नहेरेपछि आफन्त र स्थानीयले पनि सहयोग गर्न सकेका छैनन् । नागरिकका दुःख पीडा सुनेर समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका जनप्रतिनिधीको आँखामा समेत पर्न सकेको छैन, यो जोडी । सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिने भत्ता र सुविधा बाहेक अरु कुनै राहत उनीहरुले पाउन सकेका छैनन् ।
दिनभर पालमुनि बस्ने र रात परेपछि मन्दिरमा गएर सुत्छन दुबै जना । सुत्ने पालको वरिपरी झाडी छ । झाडीमै टाँगिएको पालमा उनीहरुलाई सर्प, किरा फट्यांग्राको डर पनि उत्तिकै छ । तर डर भएपनि मृत्युसँग उनीहरु डराएका छैनन् ।
सुरुमा त त्यही पाल पनि थिएन यो जोडीसँग । उनीहरुको समस्या देखेपछि रेडक्रस संस्थाका प्रतिनिधिले पाल दिएका हुन् । पाल भएपछि ओत लाग्न सजिलो भएको स्थानीय सुशील क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
‘बुढाबुढी न त कसैले भनेको सुन्छन्, न त बोल्नै आउँछ । उनीहरुको यस्तो हालत देख्दा आफूलाई निकै दया लाग्छ । तर कसैले सहयोग र उद्धार गर्न सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
पालमुनि भोकभोकै बसेको देख्दा स्थानीयलाई दया लागेपनि कसैले सहयोग गर्दैनन् । स्थानीय उद्धव चन्दले भन्नुभयो ‘के गर्नु सरकारले पनि जो धनी उसैलाई हेर्छ । यस्ता दुःखी, गरिबको पीडा कसैले सुन्दैन ।’
बोल्न नसक्ने भएपछि उनीहरुलाई मागेरै खान पनि गाह्रो छ भने काम गर्न चाहे पनि कसैले पत्याउँदैनन । अर्थात काम दिँदैनन् ।
छोराको निधनपछि विचल्ली !
११ बर्ष पहिले उनीहरुको एक छोरा जन्मिएका थिए । आफू बोल्न नसक्ने भएपनि बोल्न सक्ने छोरा जन्मियो भन्दै दुवैजना निकै खुशी भए । तर उनीहरुको त्यो खुशी दुई हप्ता पनि टिक्न पाएन ।
लिला सुत्केरी भएको १२ दिनमै छोराको ज्यान गयो । कसरी छोराको ज्यान गयो । त्यो पनि पत्तौ छैन यो जोडीलाई । एकछिनको खुशी पनि जिन्दगीभरको पीडामा परिणत भएपछि दुवै जनाको विचल्ली सुरु भएको हो । खाउँ भने गास र बसुँ भने बास नभएपछि सहाराबिहीन दुवैजना दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएका छन् । जन्मिएको छोरा पनि टपक्कै टिपेर कालले लिएपछि दुई बुढाबुढी पनि कुन दिन यो संसार छाड्नुपर्ने हो भनेर भक्कानिन्छन् । भक्कानिँदा आखाँमा आशु आएपनि मुखबाट बोली भने फुट्दैन ।
सिफारिस गर्दा पनि गरिबको सूचिमा नाम अटाएन
घर नभएका गरिब अति विपन्न परिवारका लागि बैतडीमा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत घर बनाउने भन्दै शहरी भवन डिभिजन कार्यालयले पाचँ सयजनाको नाम सिफरिस गर्‍यो ।
तर ती पाँच सयजनाको सूचिमा उनीहरुको नाम छैन । कारण उनीहरुको समस्या कार्यालयले सुनेन् । बोल्न नसक्ने उनीहरुबाट समस्या नै नसुनेपछि सरकारी कर्मचारीले झन समस्या कसरी बुझ्नु ? जनता आवास कार्यक्रममा आफूले दुईजनाकै नाम सिफारिस गरेपनि सडक डिभिजन कार्यालयले छनौट नगरेको स्थानीय बासिन्दाले बताए । पहुँच भएकालाई छनौट गरेपनि उनीहरुको समस्यासम्म नबुझी दिएपछि स्थानीय पनि सडक डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीसँग रिसाएका छन् ।
घर भत्किन लागेपछि मन्दिरमा बास !
उनीहरुको घरै नभएको होइन । घर भएर पनि बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि मन्दिरमा बस्न बाध्य भएका हुन् । आफ्ना काकाको घरमा सँगै बस्दै आएपनि उनीहरु बस्ने पुरानो घरको कोठा चुहिएर भत्कन लागेपछि उनीहरु मन्दिरको आश्रय लिन पुगेका हुन् ।
भएको सानो जमीनको लालपूर्जा नभएका कारण पनि समस्या भएको छ । ‘उहाँको नाममा जग्गाको लालपुर्जा नभएर समस्या भएको हो । यो समस्या बुझेका छौँ । व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौँ’ वडाअध्यक्ष सुरेश थापाले भन्नुभयो । तर कहिले उनीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न सकिन्छ भन्ने जवाफ वडाअध्यक्षसँग पनि छैन । दशरथचन्द नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र थापाले उनीहरुको पिडाले आफूलाई पनि दुःख लागेको भन्दै व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने बताउनुहुन्छ ।
‘मेलै देखेको छु उनीहरुको समस्या तर अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन’ दलित जोडीको समस्या बुझेको स्वीकार गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘अब तत्कालका लागि टिनको भएपनि छानो बनाइदिने सोच छ । बोल्न पनि नसक्ने दुवैजना अपांगता भएकालाई अब नगरपालिकाले सहयोग गर्छ ।’ तर कहिलेसम्म भइसक्छ त्यो भने उहाँले खुलाउनु भएन ।